Apho ubhukisha khona iNgcaciso eMfutshane yoNyaka oMtsha eMiami - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Apho ubhukisha khona iNgcaciso eMfutshane yoNyaka oMtsha eMiami
Imbewu eneenkani lukhetho olukhulu kwisidlo sangokuhlwa esitsha esingalibalekiyo.I-Instagram / Inesibindi esinenkani
Ukucwangcisela uEva koNyaka oMtsha wakwenza waziva uxinezelekile? Vumela ezinye zeendawo zokutyela ezigqwesileyo zaseMiami zikukhuthaze ungene kwi-2018 ngezinto ezifanelekileyo ezifanelekileyoI-white truffle tagliatelle, itshokholethi kunye ne-caviar, kunye ne-champagne eninzi. Owu, kwaye sisiqalo nje eso.Nantsi indawo yokutya kwi-Eva yoNyaka oMtsha kwiSixeko seMagic, kunye nebhonasi esekwe kumhla woSuku loNyaka loNyaka, eqinisekisiwe ukukhahlela unyakakwinqaku eliphilileyo (kwaye elimnandi).
Ihotele eNtofontofo iBlowout
Yonwabela isidlo sakho sokugqibela sodidi se2017 eStripSteak kwiFountainebleau.StripSteak
E Fontainebleau eMiami Beach , kwindawo yakho yokupheka yodumo uMichael Mina, StripSteak . Ukuma kwindawo yokuqala yokuhlala, enexabiso elingange- $ 150 ngomntu ngamnye kwaye iqala ngentsimbi yesi-6 emva kwemini, ibandakanya iRhode Island ulwandle scallops, ifayilet mignon kunye nepomme purée kunye neflamourne flan enepinapple eyosiweyo kunye nekhokhonathi. Isihlalo sesibini, esinexabiso elingama-295 eedola ngomntu ngamnye kwaye siqala nge-8: 30 ngokuhlwa, sithatha inotshi nge-caviar yase-Iranian, i-white truffle risotto, i-alaskan duet ye-halibut kunye ne-king crab, kunye ne-Black Forest Bar ye-dessert entle yenziwe nge-mousse yetshokholethi kunye neetsheri ezinamagama. Kwipropathi i Ipokotho yonyawo , Eqhutywa ngumpheki wodumo uScott Conant, oza kuthi akhuphe isidlo esitofotofo siphefumlelweyo sase-Itali. Cinga i-white truffle tagliatelle, i-pan-seared scallops kunye ne-passion yeziqhamo zeetshokholethi.
Ezikhethekileyo ezivela kwifayile ye- Kuhlikiwe Intshatsheli
I-coquito French toast eGlass & Vine inikwa ubisi lwekhokhonathi, isinamoni kunye nesiraphu ye-vanilla-maple.Ngokunyanisekileyo iGlasi kunye noMdiliya
eyona ndawo ithandana nabantu abathandana nabathandana nabantu abathandana kakhulu
UGiorgio Rapicavoli, ongomnye wabapheki abakhulele ekhaya abaphumeleleyo eMiami-ophumelele umboniso weNethiwekhi yokutya Kuhlikiwe ngo-2011-izakukutya okukhethekileyo kwisidlo sangokuhlwa kwimpelaveki entsha yoNyaka kwindawo yokutyela yakhe Iglasi kunye noMdiliya kwiCoconut Grove. AngolwesiHlanu, nge-29 kaDisemba ngeCawa, nge-31 kaDisemba, khetha iinzipho zamatye anqabileyo kunye ne-yuzu mayo ($ 36); ubambo olufutshane kunye ne-truffle isonka esisicaba kunye ne-truffle béchamel, itswele etshatileyo kunye ne-mushroom ($ 28); kunye nebele ledada elibisiweyo nge-bok choy kunye neorenji (i-36 yeedola). Ngomhla woNyaka oMtsha, ndwendwela indawo yokutyela esecaleni kwepaki nge-brunch enoxolo ezaliswe ziintandokazi njengeebhatata ezenziwe ngebhotolo yebhokhwe ($ 7) coquito French toast ngobisi lwekhokhonathi, isinamoni kunye nesiraphu ye-vanilla-maple ($ 12); kunye nemiphanda yesangria ezaliswe yivodka yeziqhamo ezinomdla kunye neziqhamo ezintsha ($ 10 / $ 35).
Umthendeleko weSitayile sosapho nguMphathiswa weSini oMdaka
Umpheki uJosé Mendín ukhonza into ekhethekileyo yoNyaka oMtsha.Indawo yokuhlala
Ukuba igama elithi José Mendín livakala liqhelekile, kunokuba kungenxa yokuba Imagazini yaBantu Kutshanje wamthiya njengomnye wabapheki abangamadoda abathandanayo baseMelika ngo-2017. Ngaphandle kokukhankanywa, uMendín usebenze nzima ngaphakathi kwindawo yakhe yokutyela entsha Indawo yokuhlala eSouth Beach. Ngomhla woNyaka oMtsha, nandipha imenyu yokunambitha ekhethwe ngumpheki wasePuerto Rican. Isitayile sosapho esisebenzayo, izinto eziphambili zibandakanya i-crab tempura yamatye, toro sashimi, wagyu carpaccio, king crab ravioli, itshokholethi kunye ne-caviar kunye ne-Kobe yenkomo yenkomo. Yigqibe ngesitya sokubhiyozela iidessert ezimnandi kunye ne-champagne. Ngo-8: 30 emva kwemini. ukuhlala, amaxabiso angama- $ 225 kumntu ngamnye, kufuna ukubhukisha ngokudlula Inokwenzeka .
Umxholo UAlice kwiWonderland Isidlo sangokuhlwa kunye nobusuku bobusuku
Iminyaka emitsha uEva kwiRusty Pelican iyavakala ngokungathi iya kuba lixesha eliphambeneyo.Ngokunyanisekileyo uRusty Pelican
E I-Pelican ebomvu , ngokuhlwa kuqala ngo-10 ebusuku. ngesidlo sangokuhlwa sangaphambi kwamanzi amathandathu, sipakishwe nge-champagne kunye nokuzonwabisa okunomxholo. Emva koko, landela umvundla omhlophe ezantsi emngxunyeni womvundla ungene kwindawo ye-topsy-turvy mad tea party kude kube nge-2 kusasa ngomculo odlalayo, utywala obungenasiphelo kunye nokulunywa okuncinci. Imenyu ayikakhululwa, kodwa silindele ukudityaniswa komhlaba nezitya zolwandle ezifana ne-steak, i-chorizo, i-lobster kunye nononkala. Amatikiti aqala nge Yi- $ 250 kumntu ngamnye .
Amava okuNcamla aKhethiweyo ngo Umpheki ophezulu IAlum
Khetha nokuba liBali elifutshane okanye iimenyu zokungcamla iNdaba ende kwiMbewu eNenkani.Ngembeko Imbewu Enenkani
UJeremy Ford, owaziwa ngokuphumelela kwakhe Umpheki ophezulu Kutshanje uvule iphulo lakhe lokuqala lokudlala yedwa Imbewu eneenkani eMiami Beach. Uyakwamkela u-2018 ngamava amabini okutyela ahlukeneyo. Isihlalo sokuqala, ngo-6 ntambama, sithatha iidiners ngebali elifutshane lekhosi lokungcamla, elixabisa ama- $ 195 ngomntu ngamnye. Oko kubandakanya ibhotile ye-bubbly kunye nezinto ezinje nge-Jojo Tea-cured cobia, crab fritters, usana lwaseBrussels oluneshizi yebhokhwe kunye ne-mustard emnandi, i-burgundy truffle yenkukhu, kunye ne-umami emfutshane. I $ 295 ngomntu ngamnye, ibali elinamaxesha amade amahlanu lingcamla ngo-9: 30 ebusuku. ibandakanya ibhotile yokubhabha kunye nokuma okongeziweyo njengeembatyisi kwi-Thai chili sauce, umbona kunye nonkala beignet nge-celery remoulade kunye ne-truffles, i-Maine lobster ene-curry eluhlaza kunye ne-cauliflower e-caramelized kunye nesityikityi sokutyikitya snickerdoodle cookies, ezenziwe ngebhotolo emdaka nesinamon. Emva koko, iidiners ziyakhuthazwa ukuba zincamathisele i-toast eyongezelelweyo ye-champagne ezinzulwini zobusuku.
Ukutya okuSisiseko seZityalo
Khetha ibrunch esekwe kwisityalo.Ngokutyala isityalo
Emva koNyaka oMtsha wokuzonwabisa, qala u-2018 kwinqaku elisempilweni, nge-brunch Tyala kwiWynwood . Kugxilwe kwizitya ezitsha nezisemgangathweni ezisekwe kwizityalo, uninzi lwezithako zokutyela zithathwa kwifama yabo esekwe eHomestead, kwiiParadise Farms. Ikhethwe nguJames Beard ophumelele amabhaso uHoracio Rivadero, isampulu yabadlali bebrunch brunch njenge ngqolowa kunye ne squash scramble ngamakhowa asendle ($ 16); I-tamale ranchero ene-adobo squash filling, i-salsa verde, iimbotyi ezimnyama, kunye ne-lime crema ($ 24); kunye ne cauliflower steak wakhonza kunye neminqathe yegolide eyaphukileyo kunye ne chimichurri ($ 20). I-Mocktails iya kuncitshiswa iye kwi-10 yeedola inye, kubandakanya ne-Granada fizz entsha edityaniswe neerharnate juice, iitrasi, iminti kunye neAquafaba.
Imiyalelo kaGqirha: Phatha isibindi sakho ngcono
Ukuphatha eyona nja ilungileyo: UkuPhathwa kweNja eziPhambili ziyafumaneka
Nge 'Space Ghost Coast ukuya kuNxweme' Ukuqubha kwaBantu abaDala kusetyenziswe kwi-Era's 'Blank Stare' Era
Ndijonge yonke i-'Acarius 'ngoko ke awunyanzelekanga ukuba uphonononge
Iholo lomculo lodumo 2017
Iqela lezobulungisa liphi superman
Kutheni erinn hayes wagxothwa
eyona ndawo yokuthandana nendoda etshatileyo
Indawo yefowuni yokukhangela yasimahla
Intloko yokuqala yomhlaba ka-2017